एकै पटक धेरै पानि पिउँनु घातक हुन्छ : डा. अतुल – Bannigadhi Today
एकै पटक धेरै पानि पिउँनु घातक हुन्छ : डा. अतुल
भानु ढकाल २०७७ चैत्र ९, सोमबार १९:०९
जिल्ला अस्पताल अछाममा कार्यरत डा. अतुल भारद्धाजले प्रयाप्त पानि नपिउँदा बिभीन्न रोगको सिकार भईने बताउनुभएको छ । रेडियो बान्निगढीसंगको संक्षिप्त कुराकानिमा भारद्धाजले पानि कम पिउनु भनेको बिभीन्न रोगहरु जबरजस्त शरिरमा निम्त्याउनु भएको टीप्पणी गर्नुभयो ।
कम पानि पिउदा मृगौला लगाएत शरिरका बिभीन्न अंगमा जोखिम बढी हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । पानि बढी पिउदा पनि शरिरका बिभीन्न अंगमा ठुलो समस्या देखा पर्न सक्ने भारद्धाजले बताउनुभयो । गर्मी मौसममा कतिपय मानिसले एकै पटक धेरै पानि पिउने गरेको पाईएकाले यस्तो नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । एक दिनमा तिन देखि पाँच लिटर र एक पटक एक गीलास पानि पिउन उपयुक्त हुने उहाँले बताउनुभयो ।
यसैबिच आज हामीले बिश्व जल दिवशको अवशर पारी जिल्ला अस्पताल अछाममा कार्यरत डा. अतुल भारद्धाजसंग मानब जिवनमा पानिको महत्वको बारेमा कुराकानि गरेका छौँ । कुराकानिको शुरुमा उहाँलाई हामीले मानब जिबनमा पानिको महत्वको बारेमा बताईदिनुसन भनेर सोधेका छौँ । बाईट : डा . अतुल……..
क्याटेगोरी : जीवन शैली, मुख्य समाचार, समाचार, स्वास्थ्य, हेडलाईन